Cabdirisaaq Macalin Cilmi: Gadhka Xiidh ama Xaqiisa sii(Sheeko).
Odaygii oo madasha jaleeco ku jiiday baa judhiiba isha balaq kusiiyay nin da’ dhexaad ah oo gadhku aad uwareemay,heybad iyo sunno diimeedna ku hagoogantahay.KAL!Mindhaa sheekhu wacdi iyo waanuu bar-baarta uhayaahee bal adna waxoogaa shaarubaha kusii qaado ayuu is yidhi odaygii hargaantiga ahaay.Hadduuse madashii isasoo mutaxayba waaba dumnad laciyaarahayo! Waxuu yara dhugtay oodhegta uraariciyay dhawaqii yeedhayay oo ahaa erayo ugub ku ah,cimri abadankiina uusan maqlin oo uu la dhafakaaray.Erayadaasi iyo odhaahyadaasi ay golejoogtu ku hal qabsanayeen waxaa ka mid ahaay:
(jalle’e haygu dhihin yaan wadnuhu jaw isoo odhane,
lakabiir ciyaar,habar heblo,aakhiru biish,saa’imada yeyna ka bixin Iwm)ayaa ka mid ahaay susunaddii afkooda kasoo baxaayay.waxaa intaasi sii dheereeyd in dhalintu ay garwaynaha ugu yeedhayeen"Macalinka".
Dabcan ninku ma ahayn macalimkii ay ummaddu taqaanay ee saxda ahaay,ee waa mid kaa kaduwan ,waxaana loogu bixiyay beenta oo uu aad oogu dheereeyay(Macalinka Beenta).
Odaygii durbaba irdhoowyay, ogaayna inuu soo xero dhaafay,goobtuna ayna ahayn mid ucunanta.
Hayeeshee,kasokoow dhalinta dhunsan waxaa ugaaska filan waa ku noqotay ninka cimriga biliseed kujira ,dheeha culima leh ,ee hadana maxalu sheeydaanka fadhiya,falka noocan ah falkinaya,hadalada foosha xuna fooxa ushitay una haaneedsaday,waxuuna cindigiisa ka calmaday inuusan sidaan uga dhaqaaqin ee howraar maldahan oo hogotusaaleeyn ah uhibeeyo ,deetana inta ilqoorka ka daymooday ninkii umadaxweynaa raggii dumnada ubaraxneeyd buu yidhi”ADEEROOW GADHKAN XIIDH AMA XAQIISA SII”.
Waxaan kawataa ujeedada ,waxaa marba marka kadambaysa dadkeena soomaaliyeed kusoo badanaya ,shakhsiyaadka ku takrifalaya xirfadaha iyo maamuusyada qiimaha iyo qaayaha weyn ugu fadhiya bulshada.
Waxaad arkaysaa mid sheeganaya saxafi oo daa'in abidkii ka sheekaynaya un qabiil iyo qabyaalad,oo ummadda un isku dirkeeda iyo kala dilkeeda ka shaqeeynaya.Qaar siyaasiin inay yihiin ku nadacoonaya,oo haddana u tiraabaya sida ciyaalka xaafada oo kale,oo marka aad sii dhugato hadaladooda aad ku hungoobi hammigaadii ahaay;bal siyaasigan wax ka siyaadso.Intaas kaliya mahan ,kumana koobna kuwa xirfadaha xasuuqay ee waxaad kaloo lakumaysaa ,Xariif gadhweyne ah ood moodid caalimul bilaad,marka aad lakulantdse waxaad ka helaysaa wax kaa yaabiya oo meesha kasaara hummaagii ku horboodayay ee ahaay ;inaad sheekh la jaar tahay.
Si kastaba ha ahaatee,waxaa haboon in qofku kusifoobo tilmaaha iyo shuruudaha uyaallo darajada iyo garaadaha uu sheeganayo,amaba uu kuqaraabto wax udhigma howsha uu ka shaqeeynayo si aanay dadku ugu kadsoomin ,ugana didin magaca iyo maamuuska xirfadaha shaqada ay uhayaan.